dimanche, 25 août 2019 10:36
Kolikoly avo lenta: Namoahan'ny Pôle Anti-Corruption didy fampisamborana i "Peta"
Vaky ambatolampy ny kolikoly avo lenta sy ny fanodikodinana volam-bahoaka tamin’ny alalan’ny tolobaro-panjakana natao ho an'ny Kaominina Sahasinaka sy Kaominina Ampasimanjeva, samy ao amin’ny Distrikan’i Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany.
dimanche, 11 août 2019 17:22
Arsidiosezin’Antananarivo: Namasinana ho Eveka androany i Mgr Andriantsoavina Jean Pascal
Notanterahina androany alahady 11 aogositra teo amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny fanamasinana ho Eveka an'i Monsenera Andriantsoavina Jean Pascal, izay vao notendren'i Papa Fransoa ho Eveka mpanampy eto amin'ny Diosezin'Antananarivo.
mardi, 06 août 2019 12:07
Ampangabe: Nilatsahan'ny fil courant ilay Karana mpiasan'ny fandredrehana vy, maty tsy tana ny ainy
Karana mpiasan'ny orinasa JR Métaux, izay karana ihany koa no tompony, no nilatsahan'ny fil courant n'ny Jirama tao Ampangabe, akaikin'ny Parc Analamanga ny alahady teo.
jeudi, 25 juillet 2019 16:38
Befotaka Ankavandra: Nindaosin’ny fahafatesana ilay Zandary narary navotana tamin’ny angidimby
Namoy ny ainy ny alin’ny talata teo ilay Zandary kilasy faharoa niasa tao amin’ny « Poste Avancé » Befotaka, Brigady Itondy Ankavandra – Distrikan’i Miandrivazo. Nanao ny alanenina rehetra tamin’ny fitsaboana azy ny mpitsabo tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana-Antananarivo, nanomboka ny 20 jolay 2019 nahatongavany tao, rehefa nalaina tamin’ny angidimby tany an-toerana.
mercredi, 24 juillet 2019 22:15
Ivandry – Antananarivo: Notokanana androany ny lalana profesora Zafy Albert
Ampahan-dalana mirefy 700 metatra eo anelan’ny Pullman sy kianja filalaovana tennis izy ity. Misy tsangambato ihany koa ho fahatsiarovana an'i Pr Zafy Albert, filoham-pirenena malagasy nitondra teo anelanelan'ny taona 1993-1996, izay efa tondroina ho Rain'ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara.